Iyini Imali Yesivumelwano Sesondlo? - Easy Multi Khombisa
Ngabe Uyini Imali Yesivumelwano Sesivumelwano?
Idalwe Qalile 26 / 02 / 2020
5. Imibuzo Ebuzwa Njalo
Siyini Isivumelwano Sokulungisa Isoftware?
Isivumelwano sokugcinwa kwesoftware yisivumelwano esijwayelekile esitholakala embonini yesoftware. Kuyisivumelwano phakathi kwekhasimende nenkampani yesoftware eqinisekisa ukusetshenziswa kwesoftware kuzo zombili izinjongo. Lokhu kusho ukuthi umhlinzeki we-software uyavuma ukugcina nokuvuselela i-software ukuze iqhubeke nokusebenza kahle nokuthi isesikhathini ngentuthuko yezobuchwepheshe kanye nezokuphepha. Njengekhasimende usayina isivumelwano sesondlo sokuqinisekisa ukuthi uthola ukufinyelela kulezi zibuyekezo ngokushesha nje lapho sezikhululiwe.
Isibonelo, njengoba nje imoto yakho idinga usizo njalo ngonyaka, mhlawumbe ngokushintshwa kawoyela noma ukuqondanisa kwamathayi. Isoftware idinga ukulungiswa okufanayo ukuze iqinisekise ukusebenza kahle, ngoba izwe lobuchwepheshe lishintsha ngokushesha.
Yini Isivumelwano Sokulungiswa Kwe-EMD se-EMD
Sinikeza wonke amakhasimende ithuba lokutshala imali kwisivumelwano sokugcinwa kwe-Easy Multi Display. Uma ukhetha ukungena ngemvume, uzokhokhiswa intela yamanani aphansi ka-20% wezindleko zesoftware, njalo ngonyaka.
Ukungena ngaphakathi kukunikeza izinzuzo ezimbalwa ezingeziwe:
Qiniseka ukuthi njengoba ubuchwepheshe buqhubekela phambili, kanjalo ne-EMD Software.
Lapho amanye amakhasimende acela ukwenza ngokwezifiso ku-EMD, nawe uzothola ukufinyelela kulezi zici ezingeziwe, njengezixhumi zohlobo lwedatha ezintsha.
Ngenzenjani Uma Ngingasayini Isivumelwano Sesondlo?
Ayikho inkinga! Ungaqhubeka usebenzise i-Easy Multi Display futhi inguqulo yakho yamanje izoqhubeka nokusebenza njengoba injalo. Noma kunjalo, ngeke uthole ukufinyelela kwezinye izinto ezingathuthukiswa noma ezingezwe ku-software unyaka wonke. Izici ezinjalo zingaba yikhono lokusebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zemithombo yedatha ekubonisweni kwakho.
Ukufinyelela kulezi zici kuzodingeka ukhokhe imali yokuthuthukisa isoftware okungenzeka ukuthi ingaphezulu kwe-20% yesondlo obungahle ukhokhe unyaka wonke.
Uma unesithakazelo ku-software yethu ye-Easy Multi Display, chofoza lapha ukulanda inguqulo yethu yesilingo. Ukuze sanelise zonke izinkampani (kusuka kokuncane kuye kokukhulu kakhulu), sidale izinhlobo ezintathu ze-Easy Multi Display. Uhlobo lokuqala (i-One Screen) lwesoftware yethu lubiza ama-149 $, eyesibili (i-Standard) okuyiyona ndlela ethandwa kakhulu ibiza ama-499 $ bese ekugcineni inguqulo ye- "Enterprise" ebiza ama-899 $. Unganqikazi ukubheka izinketho zethu noma uxhumane nathi ukuze uthole imininingwane engaphezulu!
Umbukiso omkhulu wedijithali we-Lord Ram ukhanya eNew York Times Square
Kungani ubuchwepheshe be-LED buyikusasa lezimpawu zedijithali zasendlini?
Ukubumba ikusasa lezimpawu zedijithali